#2 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
သင့်စားပွဲပေါ်မှာ ဖိုင်တွဲများစွာ(သို့မဟုတ်)စာရွက်စာတမ်းများစွာရှိနေပါသလား? ဤသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့အဲ့ဒီ့ဖိုင်တွေ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သိမ်းထားရတာလဲ? အ‌ရေးကြီးဆုံးအကြောင်းပြချက်ကိုသင်တွေးကြည့်ဖူးပါသလား? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အချက်အလက်အများစုကိုအဲ့ဒီ့ စာရွက်စာတမ်းတွေမှာသိမ်းဆည်းထားရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖိုင်တွဲထားခြင်းကအဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်စကားမစပ်၊ သင့်ရဲ့ Web browser ထဲမှာ Bookmarks ဘယ်နှခုလောက်ရှိနေပါသလဲ? အရမ်းများနေသလား? Online Research လုပ်ခြင်းကလည်း စာရွက်စာတမ်းတွေထားသလိုပဲ တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိနေရင်‌တောင် သိပ်ကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်… သတင်းအချက်အလက်တွေကို အွန်လိုင်းကနေအလွယ်တကူရှာဖွေရောက်ရှိနိုင်နေရင် Bookmarks တွေအများကြီးထားနေစရာမလိုပါဘူး။ သင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမှတ်ထားတာ ဒါမှမဟုတ် သင်ပြန်ရှာနိုင်ဖို့နည်းလမ်းသိထားရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ Research လုပ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုမမေ့လိုက်ပါနဲ့…
သတင်းအချက်အလက်တွေပိုပြီးရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာဖတ်နိုင်စွမ်းကအရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စကားကိုအရမ်းကြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်စရာမလိုပါဘူးဆိုပေမယ့်လည်း အင်္ဂလိပ်စာဖတ်နိုင်စွမ်းကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ သင်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အချက်အလက်တွေကိုပိုမိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်သင်ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့စီးပွားရေးစကားဝိုင်းတွေဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ရှိသောစကားလုံးများကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေါဟာရများစွာမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်ဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကို မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တောင် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ၎င်းသည် တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရုံသာမက ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးကိုပါတိုးမြှင့်ပေးသောစီးပွားရေးသမားများကို အလွန်အမင်းအကဲဖြတ်ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မှာလဲ? ကုမ္ပဏီကြီးလေလေ၊ ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ခက်ခဲလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်တာဝန်တွေကို အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဟာ Macroscopic မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ဟာသေးငယ်ပေမယ့်လည်း ကုမ္ပဏီရဲ့အလုံးစုံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် သင်ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့နည်းလမ်းကို သင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) တခြားသူတွေကို Macroscopic View ဖြင့် ကြည့်ရှုပြောဆိုကြည့်ခြင်း ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲ?
စီးပွားရေးတစ်ယောက်အနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူရခြင်းဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့်လည်း စီးပွားရေးအမြင်အနေနဲ့တော့ အသုံးမဝင်ပါဘူး။
တခြားတစ်ဖက်အနေနဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ ဆားရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူနေတာနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဆားဆိုတာကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်ပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒါကို ရှိတဲ့သူတဲ့ မရှိတဲ့သူကြားမှာကွာဟချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအရာဟာ ကုန်သွယ်မှု၊ အခွန်၊ ဘဏ္ဏာရေးစသည်တို့ကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆားရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းဟာ ဘဏ္ဏာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုစေပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ကြားခြင်းဆိုသည်မှာ သင်ရဲ့အလုပ်မှာဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်စတင်လေ့လာခြင်းမပြုမီ သင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်လိုအပ်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။